ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ထိုင်းမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ထုတ်ပြန်ပြီ
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ထိုင်းမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ထုတ်ပ...
25 มี.ค. 2563 - 01:13 น.
ကမ္ဘာတလွှားကို ပျံ့နှံ့သွားတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်ခဲ့ရာ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှာ အဝင်အထွက် ပိတ်ထားမှုတွေကို လာမယ့် ဧပြီ၈ရက်မှာ တစိတ်တပိုင်း ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
ဝူဟန်မြို့ရှိရာ ဟူဘေး ပြည်နယ်က ကျန်တဲ့ နေရာတွေမှာ ကျန်းမာတဲ့ ဒေသခံတွေကို မတ်လ ၂၄ရက် အင်္ဂါနေ့ ညလယ် က စပြီး အပြင်ထွက် သွားလာခွင့် ပြုလိုက်ပါပြီ။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဝူဟန်မြို့ကို ပိတ်ထားတာ ဇန္နဝါရီ လလယ် ကတည်းက ဖြစ်ပါတယ်
ဥရောပ နဲ့ ကမ္ဘာတလွှား တိုင်းပြည်တွေကို ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုဒဏ်ကို လက်ရှိအချိန်မှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားခံနေရလျက်ရှိပြီး အဝင်အထွက် ပိတ်ဆို့မှုတွေ ၊ ပြင်းထန်တဲ့ အမိန့်တွေ ထုတ်ပြန်ကာ နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ တင်းကျပ်မှုတွေ လုပ်လာချိန်မှာ တရုတ်မှာတော့ ရောဂါ ကူးစက်မှု ထပ်မတွေ့ရတဲ့နီးပါး ဖြစ်လာကာ ကန့်သတ်ချက် အမိန့်တွေ လျှော့ချ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေး ဝတ်စုံတွေ အကြီးအကျယ် ထုတ်လုပ်ပေးဖို့ စက်မှု အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေကို ကမ္ဘာကျန်းမာရေး အဖွဲ့ တိုက်တွန်း
စပိန်မှာ ကိုဗစ် နိုင်တင်း ရောဂါ ကပ်ဘေးပျံ့ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လုပ်ဆောင်နေပေမယ့် နေ့စဉ် သေဆုံးနှုန်း ဆက်လက် မြင့်တက် လျက်ရှိပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာ ဗြိတိန်မှာလည်း လူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။
အခုအခါ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး အလေးအနက်ထား လုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန်ရောက်လာပြီး ဗြိတိန်က လူထုကို အိမ်ထဲမှာဘဲ နေကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ကြောင်း ၊ ဒီရောဂါပိုး ကူးစက်မှု ရပ်တန့်သွားအောင် လူထုနဲ့ အတူ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြရမှာပါလို့ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က ပြောပါတယ်။
ပြင်သစ်မှာတော့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ၊ စျေးဆိုင်တွေရဲ့ အသားတင် အမြတ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးက စတင်ပြီး အစိုးရက ချေးငွေ ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အစီအစဉ် စတင်မယ်လို့ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဘရူနို လမဲရ် က ပြောပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ဆိုးလ် မြို့မှာ ပိုးသတ်ဆေး ဖြန်းကာကွယ်နေ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ လာမယ့် ကြာသပတေးနေ့ကစလို့ တလကြာ အရေးပေါ် အခြေအနေ အဖြစ် သတ်မှတ်မယ်လို့ အစိုးရက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
အခုလို ကြေညာလိုက်တဲ့ အပေါ် လူထု အနေနဲ့ မစိုးရိမ်ကြဖို့နဲ့ လူတွေ အပြင်ထွက် သွားလာမှု နည်းသွားအောင် စစ်ဆေးရေး ဂိတ်တွေ ထားရှိကာ ညမထွက်ရ အမိန့်တွေလည်း အခု ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ပါဝင်တယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ် ကျန်အိုချာရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်း ပြောသွားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှု စတင်တွေ့ရှိပြီး ကတည်းက အစိုးရ အနေနဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ အရေးယူ လုပ်ဆောင်မှု မရှိဘူးလို့ ဝေဖန် ခံနေရပါတယ်။
ထိုင်းမှာ ကိုဗစ်နိုင်တင်း ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ လေးယောက်ရှိပြီး လူကိုးရာနီးပါး ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ထိုင်းမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ထုတ်ပြန်ပြီ